မြန်အောင်သား: February 2013
Jelly Bean 4.2 မှာ USB Debugging နဲ့ Developer Options ကို Enable ဖြစ်အောင်လုပ်နည်း
ကဲ...သူငယ်ချင်းတို့ရေ...ကျွန်တော်တို့ အရင်က သုံးနေကျ gingerbread တွေ ics တွေမှာ usb debugging ကို On ချင်ရင် သိပ်မခက်ဘူးနော်။ Gingerbread မှာဆိုရင် Settings>Applications>Development>USB Debugging ကို on လိုက်ရုံပဲ။ ICS မှာဆိုရင်လည်းပဲ Settings> Developer Options> USB Debugging ကို on ရုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း Jelly Bean 4.2 မှာတော့ Google ကပညာပြထားတယ်နော်။ USB Debugging ကို hide လုပ်ထားပါတယ်။
ဒီဟာလေး ဖြေရှင်းဖို့တော့အောက်ကအတိုင်းလိုက်လုပ်လိုက်ပါ။ မခက်ပါဘူး။
1. Go to Settings>About phone.
2. အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ Build number option ကိုသွားပါ။ မနှိပ်ပါနဲ့ဦးနော်။
3. ပြီးမှ အဲဒီ Build number ပေါ်မှာ7ကြိမ်လောက်အဆက်မပြတ် နှိပ်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ "you are nowadeveloper" ဆိုပြီး အောက်က ပုံလေးထဲကအတိုင်းပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ကဲဒါဆိုရင် hidden ဖြစ်နေတဲ့ USB Debugging နဲ့ Developer Options ကို enable လုပ်လို့ပြီးပါပြီ။သင့်ရဲ့ Jelly Bean မှာလည်း USB Debugging ကို on,off လုပ်လို့ရမယ့် options လေး ပေါ်လာပါပြီခင်ဗျား။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, February 24, 2013 No comments:
Android User များသတိပြုသင့်သော အချက် ၉ ချက်(9points for android user)
ကဲ...ဒီနေ့တော့ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေ အတွက် post လေးတစ်ခုတင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့် android သက်တမ်း ကြုံသမျှ ဆောင်ရန်ရှောင်လေးတွေပါ။ စေတနာတစ်ခုတည်းနဲ့ မသိသေးသော android user ကိုကို မမ သူငယ်ချင်းများအတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အကြံပြုချက်လေးတွေသာ အသုံးတည့်သွားရင် ကျေနပ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ယူဆချက်လေးတွေကိုလည်း comment ပေးခဲ့ကြပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, February 23, 2013 No comments:
Huawei T8828 Root လုပ်နည်း
ကဲ...ကျွန်တော်တို့ တွေ root မရပါဘူး။ မြန်မာစာအဆင်မပြေပါဘူးဆိုတဲ့ huawei T8828 တော့ root ရပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ကိုမင်းစိုးရာဇာ ရဲ့ ဆိုဒ်လေးမှာ တွေ့လို့ ကျွန်တော်ပြန်လည် မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတို့ စမ်းသပ်နိုင်အောင်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ မစမ်းသပ်ရသေးပါဘူး။ အဆင်ပြေတယ်မပြေဘူးဆိုတာ comment ပေးခဲ့ပါ။ ကျေးဇူးတင်စရာရှိရင်တော့ ကိုမင်းစိုးရာဇာကိုကျေးဇူးတင်ကြပါခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, February 23, 20132comments:
Coolpad 8050 ကို root လုပ်ခြင်း
Coolpad 8050 ကို root လုပ်ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရောင်းရင်းတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အရင်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်ကို ဒေါင်းပါခင်ဗျာ။
244.4 MB တော့ရှိပါတယ်။
Coolpad 8020 ကို Root လုပ်ခြင်း
ကဲ...coolpad 8020 ကတော့ ဟောဒီ Tool လေးနှစ်ခုနဲ့ရတယ်ဗျာ။ပထမအရင်ဆုံး Shuame ဆိုတဲ့ Tool လေးနဲ့ လုပ်ဗျာ။ သူက temporary root ဖြစ်သွားမယ်။ restart ချရင် root မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဗျာ။ဒါကြောင့် Shuame ဆိုတဲ့ Tool နဲ့ root လုပ်ပြီးရင် restart မချပဲ Unlockroot 3.1 နဲ့ ထပ်ပြီး Root လုပ်ပေါ့ဗျာ။
1.Download Shuame Root Tool
2.Download UnlockRoot 3.1
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, February 15, 20132comments:
Lenovo ThinkPadTablet_A310_02_0039_0089_SC ကို ICS 4.0.3 သို့ upgrade လုပ်ပြီး Root ကြရအောင်။
Lenovo Thinkpad Tablet ဟာ စတင်ထွက်လာတုန်းက official 3.1 နဲ့ ပါ။ Root လုပ်ဖို့ အခက်အခဲ နည်းနည်းရှိတာပေါ့ဗျာ။ အခု ICS 4.0.3 ကို upgrade လုပ်ပြီး root ကြည့်ရအောင်ဗျာ။ ကျွန်တော်လည်း လိုအပ်မှ ဟိုကရှာ ဒီကရှာနဲ့ နောက်ဆုံးအဆင်ပြေသွားတာမို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။
ကဲ firmware upgrade လုပ်ပုံ နဲ့ root လုပ်ပုံလေးကို အောက်မှာ ကြည့်ပါခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, February 09, 2013 No comments:
Sony Xperia Stock Roms Collections
Sony Xperia တွေအတွက် Stock Rom Collections ပါခင်ဗျာ။ လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်အောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Monday, February 04, 2013 No comments:
Jelly Bean 4.2 မှာ USB Debugging နဲ့ Developer Opt...
Android User များသတိပြုသင့်သော အချက် ၉ ချက်(9poi...
Lenovo ThinkPadTablet_A310_02_0039_0089_SC ကို ICS...